5 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများ
ဥရောပရဲတိုက်များနှင့် ချစ်စရာကောင်းလမ်းများ နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များကိုနေရာချခြင်းဖြစ်သည်. ယနေ့အချိန်အထိဥရောပသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဓိကကျသောပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်ပါတီပွဲများဖြစ်သည် လူပျိုနှင့် bachelorette ခရီးစဉ်. ဒါကြောင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကိုစေ့စပ်စွာရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်5မော်ကွန်းနှင့်ရိုင်းသောအားလပ်ရက်များအတွက်ဥရောပရှိပါတီမြို့ကြီးများ.
အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်, ဥရောပရှိအကြီးဆုံးနိုက်ကလပ်သို့ဘားများကိုဖျက်ဆီးသည်, အားဖြင့် မီးရထားခရီးသွားလာ သို့မဟုတ်ကလပ်ခုန်, သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုစွဲမြဲဆုံး၊.
မီးရထားခရီးသွားခြင်းသည်ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းအတွက် Eco-Friendly အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, အဆိုပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်.
1. ဘာလင်မှာပါတီ, ဂျာမနီ
ဥရောပရှိအဖော်ရွေဆုံးမြို့တစ်မြို့, ဘာလင်သည်အနုပညာရှင်များအတွက်မက္ကာဖြစ်သည်, ဂီတသမား, နှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး DJ သမား. ၎င်း၏သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်စူပါပွင့်လင်းသောချဉ်းကပ်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်, ဆိုလိုတာကဘာမှမသွားဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ. ထိုကွောငျ့, ဘာလင်သည်ဥရောပ၏အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပါတီမြို့ဖြစ်သည်.
ဘာလင်ရဲ့ကလပ်နှင့်ပါတီမြင်ကွင်းတစ်ခုများသောအားဖြင့်မှောင်မိုက်ပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်. သင်တစ် ဦး Berliner တူသောဘာလင်ရဲ့ညဥ့်ဘဝကြုံတွေ့ချင်လျှင်, အဆင်ပြေဖိနပ်ထုပ်ပိုး, ကျပန်းဝတ်ဆင်နှင့်သောကြာနေ့တွင်ရောက်ရှိလာသည်. ဘာလင်ရှိအရက်ဆိုင်များစွာထဲမှတစ်ခုကိုသောက်။ စက်မှုareaရိယာသို့သွားပါ.
ဘာလင်၏အကောင်းဆုံးကလပ်ဘာလင်ရဲ့စက်မှုဇုန်inရိယာ၌နှင့်ရထားလမ်းအောက်၌ကွယ်ပျောက်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်. ဘယ်တော့မှမရပ်နိုင်သည့်ပါတီပွဲအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပါ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးလူသည်ရပ်နေမှသာရပ်လိုက်နိုင်သည်. ဘာလင်မြို့ '' clubbing ညအဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်စတင် 1 စနေနေ့တွေမှာတနင်္ဂနွေညအထိပါ. This definitely puts Berlin in the craziest and best party cities in Europe with tourists and clubbers traveling from all over the world.
သငျသညျ parth 48 နာရီတက်သည်နှင့်သင်တစ် ဦး တည်းသာကလပ်အတွက်အချိန်ရှိပါက, ထို့နောက် Berghain တွင်ပါတီပွဲလုပ်ရန်သေချာပါစေ. အကောင်းဆုံး Techno နှင့်အိမ်အသံများသည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကခုန်ကြလိမ့်မည်.
2. ဘူဒါပက်ပါတီ, ဟန်ဂေရီ
နေ့နှင့်နေဝင်ချိန်အတွင်း, ဘူဒါပက်စ်သည်၎င်း၏အထင်ကြီးလောက်သောဗိသုကာကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်နေရာများနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်. သငျသညျလမ်းများပတ်လည်လှည့်လည်အဖြစ်, သင်၏မျက်စိသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးအထင်ကရနေရာများကိုခြေရာခံနိုင်ရုံမျှသာဖြစ်သည်. ဒါပေမဲ့, ညအချိန်တွင်သင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာကမ္ဘာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်,aworld of derelict buildings that turn to Europe’s most unusual bars, နှင့်ဤထူးခြားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Budapest တတ်၏5ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများ.
မှောင်မိုက်ပြီးနောက်, တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာအာကာသ၌တည်၏, အဘယ်သူမျှမလောကဝတ်မဟုတ်သလိုအိမ်သူအိမ်သားစည်းမျဉ်းများရှိပါတယ်ဘယ်မှာ, အမှုအရာရိုင်းသွားခညျြနှောငျနေကြသည်.
Szimpla Kert သည်ခရိုင်ရှိဘူဒါပတ်စ်၏အထင်ကရဖျက်ဆီးခြင်းဘားဖြစ်သည်7နှင့်၎င်း၏ labyrinthine အပေါ်ထပ်အပိုင်းနှင့် Budapest ရဲ့ပါတီညအထူးသဖြင့်မိန်းမောတွေဝေအတွေ့အကြုံအတွက်မဖြစ်မနေ - အလည်အပတ်ခရီး.
3. ပရာ့ဂ်တွင်ပါတီ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ပရာ့ဂ်သည်ဥရောပရှိအထူးချွန်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. တစ်နေ့တာအတွင်းရဲတိုက်သို့ပြန်သွားရသည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်, မင်းသား, and knights stories, ဒါပေမယ့်ညဥ့်အခါသင်အရူးညဥ့်ဘဝခရီးသွားလာ, တားစီးတံခါးနောက်ကွယ်မှကျန်ကြွင်းရှိရာ.
မြို့တော်သည်မြစ်နားတွင်ဘီယာဥယျာဉ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, အရက်ဆိုင်, မြို့၏အံ့ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောကလပ်မြင်ကွင်းနှင့်ဘားများရှိသည်.
ပရာ့ဂ်သည်ဥရောပရှိအကြီးဆုံးကလပ်ဖြစ်သည်, ၅ ထပ် Karlovy Lazne ကလပ်. ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ် Eurotrip နှင့်အတူပရာ့ဂ်သို့ဥရောပ၏အကောင်းဆုံးပါတီမြို့များကိုလေ့လာရန်စီစဉ်နေလျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤသည်သင်၏စွန့်စားမှုအပေါ်တစ် ဦး မဖြစ်မနေရပ်တန့်သည်. သငျသညျကလပ်တံခါးကိုဝင်တစ်ချိန်ကသတိထားပါ, သင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူတစ် ဦး Prague ၌ဖြစ်ပျက်သမျှထွက်ပေါက်လိမ့်မယ်, ပရာ့ဂ်တွင်နေထိုင်သည်.
4. အမ်စတာဒမ်တွင်ပါတီ, နယ်သာလန်
လှပသောတူးမြောင်းများနှင့်ကျော်ကြားသည် ကော်ဖီဆိုင်များ, အမ်စတာဒမ်သည်လူကြိုက်များသောဥရောပတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်. ဒါဟာအရမ်းငြိမ်းချမ်း Vibe ရှိပါတယ်, ယင်း၏နာမည်ဆိုးအနီရောင်အလင်းအိမ်ခရိုင်နှင့်ကော်ဖီဆိုင်နေသော်လည်း.
ဒတ်ခ်ျအနိမ့် key ကိုစုရုံးကြိုက်တတ်တဲ့နေစဉ်, ကမ္ဘာအနှံ့ကခရီးသွား ask ည့်သည်တွေကိုမေးရင်, သူတို့ကအမ်စတာဒမ်မှာနောက်ဘက်ရှိတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်. ဥရောပရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများရှိအခြားမြို့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အမ်စတာဒမ်အတွက်, သငျသညျအရှိဆုံးကလပ်အသင်းများတွင်လက်ခံထားတဲ့အစွဲအသံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်း တိုက်ရိုက်လွှဂီတ. Live show များသည်အမ်စတာဒမ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်.
အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ဂီတကလပ်အချို့သည် Melkweg နှင့် Bimhuis တို့ဖြစ်သည်, နှင့်အကောင်းဆုံးနိုက်ကလပ်များမှာ De Marktkantine နှင့် Shelter တို့ဖြစ်သည်.
5. ဗီယင်နာတွင်ပါတီ, သြစတြီးယား
၎င်း၏မကြုံစဖူးအော်ပရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဘဝအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသောမြို့သည်လည်းအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောညပျော်စရာညဖြစ်သည်. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိအခြားနိုက်ကလပ်မြင်ကွင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်, ဗီယင်နာရှိ nightlife မြင်ကွင်းသည် ပို၍ ရင်းနှီးပြီး ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်. ဥပမာ, ဖြေလျော့ပေးခြင်းတံခါးမူဝါဒများနှင့်အတူဗီယင်နာအတွက်ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေနိမ့်သည်.
ဗီယင်နာအတွက်, သငျသညျအများအားဖြင့် techno ကလပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အချို့သောကလပ်များရှိမြေအောက်နှင့်အက်ဆစ်စတိုင်များလည်းရှိသည်.
အကောင်းဆုံး techno ပါတီများအတွက် Das Werk နှင့် Grelle Forelle သို့သွားပါ. သငျသညျကလပ်တွားလိုလျှင် Gurtel ကို ဦး, မြို့လယ်ခေါင်ကဖြတ်သွားတဲ့လမ်း. သင်ကအရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အများစုကိုစုစည်းထားသည့်နေရာဖြစ်သည်. Venster99 ကိုစစ်ဆေးရန်သေချာပါစေ.
Elektro Gonner သည်ဗီယင်နာ၏အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောညဥ့်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်. လျှပ်စစ်ဆိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ၎င်းသည်ဗီဒီယိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဂီတအတွက်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်. Le Loft ဘားသည် Sofitel Vienna Stephansdom ၏ထိပ်တွင်တည်ရှိပြီးမော်ကွန်းနေဝင်ချိန်နှင့်မြို့၏ရှုခင်းများကိုတွေ့နိုင်သည်.
ဥရောပ၌ရှိသည့် Nightlife ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အကောင်းဆုံးရာသီသည်အဘယ်နည်း?
နွေ ဦး နှင့်နွေ ဦး ရာသီသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီမြို့များကိုခရီးသွားခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်သည်.
၀ င်ကြေးသည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကွဲပြားသည်. ဥရောပမြို့ကြီးအများစုသည်အလွန်တတ်နိုင်ကြသည်, ဥပမာ, ပရာ့ဂ်နှင့်ဘူဒါပက်စ်, 5-20 euros entrance and alcohol at reasonable prices, တချို့နေရာတွေကပိုစျေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအရာ, အစောပိုင်းလာရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်တန်းစီထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးအကြိုပါတီများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့သည်သင်ခရီးထွက်လျှင်ဘာလင်ဖြစ်သည် တင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်. အမ်စတာဒမ်နှင့်ပရာ့ဂ်တို့ကဆောင်းရာသီတွင်အလွန်ကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်နည်းနည်း pricier.
ကောက်ချက်ချရန်, ဥရောပ၌မည်သည့်အရသာအတွက်ကမ်းလှမ်းရန်တစ်ခုခုရှိသည်, အလိုဆန္ဒ, ဆိုးညစ်အဆင့်, နှင့်ဘတ်ဂျက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်5ပါတီမြို့ကြီးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအရာများဖြစ်သည်. သင်ဟာ bar hopping သို့မဟုတ် live music club များနှင့်စတင်ညင်ညင်သာသာစတင်ပြီးဥရောပရှိအကရဆုံးအကအခုန်များမှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်, အားလုံးတစ်ခုတည်းည၌. အားလုံးကိုထိပ်ဆုံးသို့, မြို့တိုင်းကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသည် မီးရထားကနေတဆင့် ခရီးသွား, ဒါကြောင့်အရူးပါတီပွဲတနင်္ဂနွေကိုသွားပြီးအားလုံးလည်ပတ်တာဟာမင်းရဲ့အရိုးရှင်းဆုံးအိပ်မက်ပါ 5, ထို့နောက်ဥရောပစောင့်ဆိုင်းနေသည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့စာရင်းရှိလှပသောပါတီမြို့ကြီးများသို့သင်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီ ၅ မြို့” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, သင် / fr မှ / က de သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
အမ်စတာဒမ် ဘာလင်ပါတီ မင်္ဂလာပါ ယူနီဖောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ တွေကတော့ ပါတီ ပုဂံ TravelVienna ရေနံချောင်း